Shina 3mm * 25cm tapa-tsipika vita amin'ny orinasa Bottle diffuser sy mpamatsy | Hoyer
Ny ravina diffuser tsirairay dia manana ny lavany 25 cm (10 santimetatra) ary ny savaivony 3 mm. Izy ireo ihany ny habeny mifanaraka aminy, izay azo apetraka ao anaty tavoahangy diffuser na ampiasaina ho toy ny haingo. Ny haben'ny tapa-kazo dia azo namboarina, raha hafa habe hafa ianao, azafady mba hifandraisa aminay mivantana.
Size: 30 * 250mm / 1,18 * 9.84 santimetatra
Color: tany am-boalohany, mainty na araka izay takianao
Fitaovana: rattan voajanahary hazo kely volotaras, mora azo ekena, kojakoja ampiasaina ho mpitatitra menaka diffuser, tsy mila mandrehitra azy.
Ireo hazo vita amin'ny hazo ireo dia vita amin'ny rattan, izay marefo sy maivana ary ho porofona malefaka ary maina, ka amin'ny ankapobeny dia tsy mahazo bobongolo izy ireo.
Aroma diffuser dia fomba iray tsotra sy mahomby ary azo antoka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsy mila manazava izany ianao
tsy misy setroka, tena hafa amin'ny fandoroana labozia.
Ampiasaina: Ny volotara diffuser izao dia fomba mahomby indrindra hanampiana ny fofona ankafizinay indrindra amin'ny efitra fandraisam-bahiny na habaka hafa. Ataovy fotsiny ny tehina volotara ao anaty tavoahangy mihamalalaka, avy eo dia hatsipy ao anaty volotara ny menaka, ary alefa anaty rivotra ny fofona rehefa voasarona ny volotara. Azonao atao ihany koa ny mamadika ny volotara mitsitokotoko isaky ny iray na roa isan-kerinandro mba hampivoarana ny fofona manitra.
Fanamarihana: Azafady, avelao ny ankizy tsy latsaky ny telo taona tsy lavitra ny menaka miora sy ny hazo volotara, na milalao eo ambany fanaraha-mason'ny olon-dehibe.
Size 30 * 250mm 1,18 * 9.84 santimetatra
Color fotsy ny fanontana na ny loko namboarina dia azo ekena ihany koa
Previous: 28/410 Cap aluminium mendrika ho an'ny tavoahangy diffuseur Glass
Manaraka: Mahavariana Sola voninkazo am-borona vita amin'ny voninkazo noho ny menaka manitra
hazo kely volotara
hazo vita amin'ny volotara ho an'ny tavoahangy diffuser